Xogaha Saadaq Joon iyo ciidamo badan oo la socda oo Gaadhay Magaalada Dhuusamareeb |
Xogaha Saadaq Joon iyo ciidamo badan oo la socda oo Gaadhay Magaalada Dhuusamareeb
Banaadir(GNN):-Jeneraal Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay laga dejiyey ciidamo aad u hubeysan oo hor dhac u ahaa wafdigiisa maanta gaaray Dhuusamareeb.
Saadaq Joon lama hadlin saxaafadda, lamana shaacin u jeedada dhabta ah ee safarkiisa Dhuusamareeb, balse warar ay heshay Caasimada Online waxay sheegayaan in Dhuusamareeb uu ka dhigan doono saldhigiisa ugu weyn inta ay socodaan doorashooyinka dalka.
Salkaalkaan ayaa ilaalo xoog leh la tegay Dhuusamareeb, waxaana la sheegay in qorshihiisu uu yahay inuu saameyn ku yeesho doorshada dalka, gaar ahaan xildhibaanada lagu soo dooranayo Galmudug oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo.
Warar aan la xaqiijin waxay tilmaamayaan inuu isku soo sharaxi doono Senator, gaar ahaan kursiga guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Aqalka Sare Abshir Bukhaari, kursigaas oo Aqalka Sare ka soo gala magaalada Cadaado.
Saadaq Joon ayaa maalin ka hor ka soo laabtay safar dibadda ah oo mudooyinkii dambe uu ku maqnaa, waxaana jirta xurguf xoog leh oo kala dhaxeysa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dagaal toos ah iyo mid siyaasadeedba ku qaaday Saadaq Joon markii uu noqday sarkaalkii ugu horeeyey ee ka hor yimid mudo kororsigii fashilmay ee dhacay 12-kii Abriil, waxuuna Farmaajo garaadihii iyo xuquuqdiisii ciidan kala noqday Saadaq Joon.
Safarka Saadaq Joon ee Dhuusamareeb waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor uusan weli soo magacaabin xubnihii laga sugayey ee guddiyada doorashada, waxaana maalmihii u dambeeyey soo baxaysay xog sheegeysa in Qoor Qoor cadaadis la xariira magacaabidda guddiyadaas uu ka soo wajahaayo xafiiska Farmaajo oo doonaya inuu sameyn ku yeesho.